Aghụghọ iji mechie ọnụ ụzọ na igwefoto | Akụkọ akụrụngwa
Esi gbanyụọ ụda mkpuchi na igwefoto gam akporo anyị
Mmanya na-egbu egbu | | android, Mobiles
Ọ fọrọ nke nta ka anyị kwenye nke ahụ ọ dịghị otu onye na ndụ zere ịse fotoỌ bụrụ n’inwere ekwentị mkpanaaka gam akporo ma ọ bụ mbadamba aka gị. Ngwaọrụ ndị a taa nwere igwe foto mara mma, nke nwere ike inyere anyị aka ijide oge kachasị mma na ndụ anyị. Ma Gịnị na-eme ma mmadụ tụọ ụjọ maka igwefoto ahụ?
Ọnọdụ a nwere ike ibute ụfọdụ ndị ezi-na-ụlọ ma ọ bụ ndi enyi anyị, ndi aga-enyefe ya n'ụzọ ụfọdụ ihe a maara na egwuregwu na ụwa dị ka "egwu egwu"; N'ọnọdụ dị otú ahụ, ọ bụrụ na anyị eduzi igwefoto nke ngwaọrụ mkpanaka anyị na-ekwu banyere otu onye na otu onye ahụ, ha enweghị mmasị n'echiche nke anyị ijide oge ahụ, mgbe ahụ ọ gaghị ekwe omume ịme ihe megidere uche ha. The nsogbu nwere ike ime mgbe kwuru na onye na "ogbo ụjọ" nụ ụda mkpuchi nke na-esitekarị na igwefoto na-akwụsịghị. N'ihi nke a, ugbu a, anyị ga-ekwupụta ụfọdụ ụzọ ọzọ ị nwere ike iji kwụsị ụda a ma si otú a, were foto na-enweghị onye maara banyere ya.
1 1. abkwụsị ụda nke ntọala igwefoto
2 2. Were foto na ọnọdụ nkịtị
3 3. Tinye anyị mobile ngwaọrụ ọnọdụ nkịtị
1. abkwụsị ụda nke ntọala igwefoto
Uzo mbu nke anyi ga atule bu nke a, ya bu, anyi aghaghi ibanye nhazi nke sistemu anyi ma choo nhọrọ nke gha enyere anyi aka ikwusi uda a
N'ezie ihe anyị ga-eme bụ itinye nhazi nke ngwa igwefoto, nhọrọ nke na-abụkarị n'otu oghere dị ka GPS, nchekwa, mma onyonyo, ọdịiche akpaaka, tọgharịa na nhọrọ ole na ole ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe kpatara na inwebeghị ike ịchọta nhọrọ a na nhazi nke ngwaọrụ gị, mgbe ahụ ọ pụtara na ngwaọrụ a anaghị akwado ịkwụsị ụda a. Ma echegbula tupu oge eruo, ebe ọ bụ na maka nke a, anyị ga-atụ aro ụzọ ole na ole, ọbịbịa nke abụọ nke ngwa ndị ọzọ na-akwado.
2. Were foto na ọnọdụ nkịtị
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ na-ahọrọ iji ngwaọrụ ndị ọzọ na usoro ọ bụla ha na-arụ ọrụ, n'ihi eziokwu ahụ bụ na atụmatụ ndị a na-abụkarị na-n'ụzọ zuru ezu ahazi nke mere na onye ọrụ, na-eji isi ọrụ na ihe ọ bụla ọzọ. Na-ekwu maka igwefoto foto nke gam akporo ekwentị mkpanaka anyị, ngwa nke ndị ọzọ anyị ga-adabere na ya nwere aha Igwefoto nkịtị, nke bụ n'efu ma ị nwere ike iji ya na-enweghị ụdị mmachi ọ bụla.
I nwere ike ịna-eche Kedu otu ngwa nke atọ a si arụ ọrụ? Ọ dịghị ihe dị mfe karịa nke ahụ, ebe ọ bụ na ibudatara ngwa ọrụ na Playlọ Ahịa Google site na njikọ na-esote, ị ga-emepe ngwa ahụ wee pịa bọtịnụ ga-ewe foto achọrọ, usoro iji gbaa ọsọ na ọnọdụ ịgbachi nkịtị na-enweghị onye matara maka ọrụ ị mere n’oge ahụ.
3. Tinye anyị mobile ngwaọrụ ọnọdụ nkịtị
Anyị nwere nhọrọ nke atọ na nke ikpeazụ ma a bịa jiri igwefoto nke ngwaọrụ gam akporo anyị nwere ụda mkpuchi ihu. Lee ihe anyị nwere ike ime bụ gbanyụọ ụda nke ngwaọrụ niile, ihe yiri nke a na-emekarị na iPad, ya bụ, obere ngbanwe na-agagharị na mbadamba Apple Ọ na-emechi ụda niile na-abata ma ọ bụ na-apụ apụ.
Iji mezuo nke a, ị ga-aga nhazi nke ngwaọrụ mkpanaka gị wee chọọ nhọrọ ahụ kwuruỌnọdụ ịgbachi nkịtị«; N'agbanyeghị iji nhọrọ a mechie ụda mkpuchi nke igwefoto ka kwụ ọtọ, enwere ụdị ụfọdụ ebe ọrụ a nwere ike "anaghị arụ ọrụ".
Anyị enyela onye na - agụ akwụkwọ anyị nhọrọ 3 kwesịrị ekwesị ị nwere ike iji n'oge ọ bụla, ebumnuche nke see foto site na iji ekwentị mkpanaka gị, n’enweghị onye maara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Esi gbanyụọ ụda mkpuchi na igwefoto gam akporo anyị
Ọdịnihu nke Wii U na egwuregwu
Ndụmọdụ Smart iji mụta banyere Chromebooks